सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुँने प्रचण्डको धारणा | रुपान्तरण
सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुँने प्रचण्डको धारणा
२५ कार्तिक २०७६, सोमबार १७:२६
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँगको सीमाको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने समय नआएको बताएका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएको समितिका सदस्य डा. डिला संग्रौलाले जानकारी दिइन् । ‘सीमा समस्या अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने समय भएको छैन,’ छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यो भने झन् समस्या पैदा हुन्छ।’
रुपान्तरणसँग कुराकानी गर्दै डा. संग्रौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्माा ओली भने उपस्थित नभएको जानकारी दिइन् । प्रचण्डको भनाई उधृत गर्दै उनले भनिन्–‘समितिले वुझाएको प्रतिवेदन हेरेपश्चात् वहाँले कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्दैछौं अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बुँदा नराखौं भन्नुभयो’ ।
यस्तै छलफलमा सहभागि भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भारतले कव्जा गरेको भुमि नेपालको भएकाले यसको रक्षा गर्न र फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले भने–‘त्यो भुमि हाम्रै हो , हामी सीमाको सुरक्षा गर्छौ र भुमी फिर्ता ल्याउँछौ।’ उनले कुटनीतिक र राजनीतिक विकल्पबाट वार्ता गरेर समस्या समाधानका गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै बैठकमा सहभागि भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्यालले नेपालको हाल प्रयोगमा रहेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै लिम्पियाधुराको काली नदी नै नेपाल भारत सीमाना भएको बताएकी थिइन् ।
समितिले नक्सामा त्रुटि भएको सरकारले स्विकार गरेका कारणले लिम्पियाधुराको कुटीयांदी नदिलाई आधार मानेर आधिकारीक नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कापालानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् । यस्तै नयाँ नक्साअनुसार पाठ्यक्रमहरुमा सुधार गर्न समितिले सरकारलाई निर्देषन दिएको छ ।